एभरेष्ट बैंकको २ लाख ५३ हजार ७९७ कित्ता सेयर लिलामी खुला, कहाँ जाने फारम भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » एभरेष्ट बैंकको २ लाख ५३ हजार ७९७ कित्ता सेयर लिलामी खुला, कहाँ जाने फारम भर्न ?
काठमाडौं - एभरेष्ट बैंकको सर्वसाधारण समूहको २ लाख ५३ हजार ७९७ कित्ता सेयर लिलामी आइतबारदेखि बिक्री खुला गर्न लागेको हो । लगानीकर्ताले यो सेयरमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर त्यसभन्दा बढी भाउ तोकी निवेदन दिनुपर्नेछ । एभरेष्टको हाल बजार मूल्य भने १ हजार २७२ रुपैयाँ छ । यसमा आवेदन दिने अन्तिम म्याद भने असोज १ गते तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन प्रयासरत रहेको एभरेष्टले असार १८ गतेदेखि साउन २२ गतेसम्म १ करोड ५० लाख ८८ हजार ८७ कित्ता (३३%) हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । जसमा ३२ हजार ७९८ जना सेयरधनीले १ करोड ४८ लाख ३४ हजार २९० कित्ता हकप्रद सेयरमा आवेदन दिएका थिए । बाँकी २ लाख ५३ हजार ७९७ कित्ता हकप्रदमा आवेदन नपरेकाले अहिले लिमामीमा ल्याएको हो ।
लगानीकर्ताले लिलामीको बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स, लाजिम्पाट काठमाडांै पुग्ने गरी आवेदन फारम बुझाउनुपर्नेछ । बोलपत्र असोज २ गते बिहान १० बजे एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स, लाजिम्पाट काठमाडौंमा खोलिनेछ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा एभरेष्टको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ७४ करोड १० लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रद र बाँकी सेयर लिलामीमा बिक्री गरिसकेपछी भने बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३ करोड ५२ लाख ३४ हजार ४०० रुपैयाँ पुग्नेछ । चौथो त्रैमासमा बैंकले १ अर्ब ९८ करोड १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । एभरेष्टको प्रतिसेयर आम्दानी ४३ रुपैयाँ ७८ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २२९ रुपैयाँ ९९ पैसा छ ।